Myanmar Muslim,” This is our country. This is our land.” မြန်မာမွတ်စလင်မ် “ဒါ တို့ပြည်၊ ဒါ တို့မြေ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဟာ မည်သူ့ကိုမျှပြုံးပြဖားယားပြီး ကိုယ့်မှာ အပြစ်ရှိနေသလိုလိုနဲ့ အောက်ကျိူ့ဆက်ဆံစရာ မလိုပါ။
မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဟာ ဒီနေ့ ဗမာလို့ ပြောနေသူတွေနဲ့ ပြည်ထောင်ဖက် လူမျိူးတစ်မျိူးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကို ဒီနေ့ ဒုက္ခပေးနေသူများ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ပါ။ သင်တို့ မနက်ဖန် ဒုက္ခရောက်ကြမည်။
One Response to “Myanmar Muslim,” This is our country. This is our land.” မြန်မာမွတ်စလင်မ် “ဒါ တို့ပြည်၊ ဒါ တို့မြေ””
December 10, 2021 at 1:02 pm | Reply
PSA Blog – ပြောမယ်
Last resort (တခြားဘာနည်းလမ်းမှ အလုပ်မဖြစ်တော့လို့ မလွှဲသာမရှောင်သာ လက်နက်စွဲကိုင်အာဏာဖီဆန်တော်လှန်တဲ့ နောက်ဆုံးနည်းလမ်း)
၁၉၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက်မှာ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း Preambleမှာ-
“Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, asalast resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,” လို့ ပါရှိပါတယ်။
ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကိုအတည်ပြုကတိက၀တ်ပြုထားတဲ့ အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာယန္တယားတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဖြင့်ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် နှေးကွေးပျက်ကွက်နေဆဲ ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုမကာကွယ်နိုင်မှုကြောင့်ပဲ နိုင်လိုမင်းထက်ဆိုးသွမ်းတဲ့အာဏာရှင်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကို တော်လှန်ပုန်ကန်ရာမှာ လက်နက်စွဲကိုင်ရတဲ့အထိ နောက်ဆုံးနည်းလမ်းရောက်စေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူမဆို ဖိနှိပ်ခံရရင် တော်လှန်ကြမှာ ဓမ္မတာပါ။
အခုတော့ ဗမာလူထုလည်း ကိုယ်တွေ့ရုန်းကန်တော်လှန်နေကြပြီမို့ – နှစ်(၇၀)တာ လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်နေကြရတဲ့ အခြားသောလူမျိုးစုတွေ အစုအဖွဲ့တွေကို အခုအချိန်မှာ အနည်းနဲ့အများ နားလည်လာနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ပြည်နယ်အသီးသီးက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအပေါ် အရင်ကလို မြန်မာစစ်တပ်အလိုတူအလိုပါ ဖက်ဆစ်အတွေးအမြင်တွေနဲ့စွပ်စွဲ‌ပြစ်တင်တာတွေကို အခုကစ ထပ်မလုပ်ကြစို့။
ကိုယ်ခံရချိန် လူ့အခွင့်အရေး လိုချင်တောင်းဆိုကြပြီး၊ ကိုယ်အဆင်ပြေချိန် တခြားလူနည်းစုတွေခံရချိန်မှာတော့ “လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ အလကား၊ ဒေါ်လာစားတွေ လုပ်စားစကားလုံး၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာ နယ်နိမိတ်က ပိုအရေးကြီးတယ်” ဆိုတဲ့ ဘ၀မေ့စကားတွေပြောတာမျိုး ထပ်မပြောကြဖို့လိုတယ်။
ကိုယ်က လူသားမွေးရာပါရပိုင်ခွင့်တွေကို လိုချင်တာက သင့်တော်မှန်ကန်တယ်၊ တခြားလူတွေက လိုချင်တာတော့ မသင့်တော်မမှန်ကန်ဘူး ဆိုတာမျိုး ထပ်လုပ်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ၁၉၈၈မှာ လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုကြသူတွေထဲက အများစုဟာ ၂၀၁၂-၂၀၂၀အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကို နားခါး အပြစ်မြင်ဆန့်ကျင် မကောင်းပြောခဲ့ကြတာ နီးသောသမိုင်းသက်သေရှိပါတယ်။ ၂၀၂၁အလွန် နောင်တချိန်မှာ အဲဒါမျိုး ထပ်မလုပ်မိကြဖို့အတွက် အခုကိုယ်‌တွေ့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကာလကို အမှတ်သည်းခြေရှိကြပါစို့။
ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၁